Gamepron: Yakanakisa Isingaonekwe Hacks & Kubiridzira neAimbot
Isingaonekwe Game Hacks
Kugamuchirwa Ku Mutambo
Mutungamiri weMusika Mukusazivikanwa Game Kubiridzira.
40+ Mitambo, 100+ Game Hacks uye kuverenga. Gamepron ndiyo yega sarudzo yezvako zvekubiridzira zvido.
Wona Zvese HacksShanyira Shopu Yedu
Ruzivo rwekuchengetedzwa kusingakundike nekusarudza kubiridzira nemhando yepamusoro yekubiridzira inowanikwa pano paGamepron. Maakaunzi ako haazombove panjodzi kana iwe uchishandisa imwe yedu yekunyepedzera uye ESP sarudzo, sezvo isu taita yakasarudzika anti-cheat dziviriro maitiro mune edu ese maburitsiro!
Mitengo yemahacks edu iri kuzosiyana zvichienderana nenguva yaungade, uye vamwe vanhu vachatoti isu tinobhadharisa "premium" mutengo. Zvishandiso zvatinoburitsa kuruzhinji zviri pamusoro pemutsara, uye mitengo yacho inodhura kwazvo.
Kusawirirana mune hacks iwe yauri kushandisa kunokutendera iwe kuhwina mimwe mitambo zvisinei nemusoro wauri kutamba, ndosaka Gamepron ichinyatso kupa zvinoshanda maficha (saAimbot, ESP, Wall Hack, uye NoRecoil) mune yega yega imwe yeiyo maturusi atinosunungura. Kunge zita rinotaura, maturusi edu achakubatsira iwe paGamepron chete!
Hacks yeZVO Zvese Zvaunofarira Mazita
Gamepron yakagadzirira kukushandira iwe nekugona kwedu kwese, zvisinei nemutambo upi wauri kutsvaga kuti uwane hacks. Isu tinopa kubiridzira kwemitambo dzakasiyana siyana, zvese izvo zvakagadzirirwa kuti zvikubatsire kuhwina zvimwe - kuti unozvikunda sei mitambo iyoyo zviri kwauri! Nesarudzo yakakura kudaro yekusarudzika sarudzo yaunosarudza kubva, unenge uchinzwa kunge mwana mudiki chitoro chewiti iwe paunotenga hacks ne Gamepron. Kunyangwe iri Fortnite, Overwatch, Warzone, kana chero kumwe kuburitswa kwakakurumbira, isu tine cheats iwe dzaunotsvaga!
⬤ Mamiriro: Online 🞄 2 Variants
Fortnite anga aripo kwemakore mashoma, asi danho rekuzivikanwa uyu mutambo wemitambo uchiri kushamisika. Iwe unogona kuwana mukana kune ese akanakisa eFortnite Hacks ipo pano paGamepron - ingave iri Aimbot yekururamisa kwakanyanya kana yambiro yeYambiro kukuchengeta iwe wakangwarira, isu tine zvese.
⬤ Mamiriro: Online 🞄 5 Variants
PUBG inogona kushushikana-kudzikamisa kana madenderedzwa mashoma apfuura akauya, asi kushandisa yedu PUBG Hack ichakubvumidza iwe kupedza mutambo usina kunetseka (uye nekuhwina!). Kutaura uye kuona nzvimbo yemuvengi wako kwakakosha muPUBG, uye yedu PUBG Hack inokutendera kuti uite chaizvo izvo.
PUBG Lite ndiyo nharembozha yePUBG uye zita iro vazhinji vanogadzira vatambi vanokanganwa kutombofunga nezvekuburitswa kwavo. Kwete chete isu tinokutendera iwe kubira muPUBG Lite, asi edu ese ePUBG Lite hacks akagadzirwa nehunhu mupfungwa.
⬤ Mamiriro: Online 🞄 6 Variants
Apex Legends inogona kunakidza kune vese Solo uye Chikwata chevatambi, asi kushandisa yedu Apex Legends kubvumira kunokutendera kuti ubudirire zvisinei nemamiriro ezvinhu. Izvo hazvina basa kuti unodonhedza kupi, zvombo zvipi zvaunazvo, kana hunhu hwaunoshandisa - kuhwina kuri kuuya nekureruka pano.
Muraraungu 6 Kukombwa Hacks
⬤ Mamiriro: Online 🞄 4 Variants
Tom Clancy's Rainbow Six Kutyisidzirwa uchiri iwo mutambo wakakwana wevanokwikwidza vatambi kupasirese, uye izvo zvinoreva kuti iwe uchazoda kushandisa yedu RB6 Hack kuona kuti urikufambidzana neboka. Kunyangwe iwe uchironga pakutamba yakarongwa kana Ruzhinji, Gamepron inogona kukutora iwe kune inotevera nhanho!
Mumutambo wekupona seRust, chero chinhu chinogona kuitika - ndosaka kushandisa yedu Rust Hack ndiyo nzira iri nyore kwazvo yekuona kubudirira kwako. Vanhu vari kugara vachiita chero zvavanogona kuti vafambire mberi muRust, uye dzimwe nguva unongofanira kugonesa yedu Rust Hack uye kutora kutsiva.
⬤ Mamiriro: Online 🞄 3 Variants
Kuve uri mutsva mutambo zvinoreva vazhinji vevabati vehack vasati vapedza zvishandiso zvavo zveValorant, asi kwete Gamepron! Yedu yakazara-yakaratidzwa Valorant Hack inowanikwa kune chero munhu uye wese munhu anochida, zvisinei nehunyanzvi hwako hwehunyanzvi. Inzwa kuti zvakaita sei kubudirira mumakwikwi akadaro!
Chikamu 2 Hacks
⬤ Mamiriro: Online 🞄 1 musiyano
Tom Clancy's Chikamu chechipiri chimwe chinoshamisa chinokutendera kuti uburuke munzira yaTom Clancy neimwe nzira. Iyo yechitatu-munhu shooter iyo izere neakakwira-simba AI vavengi uye chaicho-hupenyu vatambi zvakafanana. Shandisa yedu Chikamu 2 Hack kugara pamberi pemakwikwi uye kubudirira.
Vazhinji vedu tinokanganwa zvazvinoita kukundikana mumitambo yemavhidhiyo, ndiko kuti kusvikira Kutiza kubva kuTarkov kwauya. Kana iwe waida EFT Hacks iwe yaunogona kuvimba kuti igare yakachengeteka panguva dzeavo vanopamba zvine njodzi, Gamepron ine zvese zvehunhu hwaunoda kupamba nekupfura zviri nyore.
Cold Hondo Hacks
Tonga sezvaungaita mune chero imwe Call of Duty zita uchishandisa yedu inoshamisa COD Nhema Ops Cold War hacks! Nezvishandiso zve Gamepron unosungirwa kubudirira, zvisinei nehunyanzvi hwako. Isu tinoisa simba chairo mumaoko evashandisi vedu pano paGamePron.
Yemazuva Ano Hondo Hacks
Yedu Yemazuva Ano Hondo Hacks inokutendera kuti ubudirire zvisinei nemutambo mutambo wauri kutamba, sezvo vavengi vako vasiri kuzodzivirirwa kubva pahasha dzako. Unogona kugonesa Yemazuva Ano Hondo Aimbot (iine Instant Kill) kuona kuti kana iwe uchida kuti mumwe munhu afe, zvinoitika - hapana mibvunzo yakabvunzwa!
Kudanwa kweDuty: Warzone Hacks haina kuoma kuwana, asi imwe yeiyi hukuru? Izvo zvinogona kuwanikwa chete iko kuno ku Gamepron. Kana iwe uchitarisira zvimwe kubva muWarzone Hack yako uye uchida zvakanyanya maficha zvinogoneka, isu tine yekupedzisira yese-in-one chishandiso chako!
Overwatch ichiri kuenda yakasimba kunyangwe mushure memakore ese aya, izvo zvakanaka. Nevanhu vazhinji varikuramba vachiri, zvinongoreva kuti panofanirwa kuve nezvakawanda zvekuhwina zvakaibva pakutsvaga - shandisa yedu yeWatchwatch Kubira uye kufambira mberi mune ese Akarongwa uye Ruzhinji machisi nekukurumidza.
Vakafa neMasikati Hacks
Kutarisa kukwirisa ako mazinga eadrenaline uye kuita kuti moyo wako upombi? Paunenge wawana yedu DBD Hacks inogoneswa, mutambo wese uchaita senge kutandara kunofamba mupaki. Juke yako nzira yekukunda seMupukunyuki, kana kurova zvine huchokwadi seMhondi.
Vamwe vakataura kuti Last Oasis yakafanana nemusanganiswa pakati pezvose ARK neRust, zvinonzwisisika kuti sei vanhu vazhinji vachizvifarira. Kana iwe uchida kubudirira mune ino mhando nyowani mutambo, iri nyore nzira yekuita kudaro ndeye kushandisa kwedu Oasis hacks.
Vakafa Rutivi Hacks
Asi mumwe mutambo wekupona, Deadside iri kuenda kuyedza hunyanzvi hwako hwekutamba mune zvese zvinoita. Kana paine pakamboita Deadside hack iyo inobvumira vanotangisa kuti vabatsirwe kubva pakutanga, Gamepron ine basa rekuiunza kuruzhinji. Iwe haugone kuwana ekushomeka maturusi pano, chete zvakanaka zvinhu.
Nhandare yehondo 5 Hacks
Nhandare yehondo 5 mutambo wakakura-diki uyo wauri kufamba uchifamba nemamepu makuru mune yega yega mutambo, izvo zvinogona kutsamwisa dzimwe nguva. Kunyangwe ichi chiri chokwadi, kushandisa kwedu BF5 Hacks kuchaita kuchengetedza kuuraya uye kukunda zviri nyore (pamwe neako wekutanga kukoshesa!). Inzwa simba neese edu eBattlefield 5 hacks!
CS: Enda Hacks
Counter-Strike: Global Inogumburisa chave chinhu chinodyiwa mukati memharaunda yemitambo kwenguva yakareba, ndosaka tichiri kuvaka timu yekusimudzira kwayo. Mutambo wacho uchiri kubudirira, uye yedu CSGO Hacks ichakubatsira iwe kubudirira zvakare! Usaise yako mari muzvishoma zvishandiso zvingangoita kuti iwe urambidzwe, kunyanya kana iwe uchingo tarisira pa GamePron kuti basa riitwe nemazvo.
Kurambidzwa kubva kumitambo yako yaunofarira yemavhidhiyo idambudziko rezvikonzero zvakawanda, asi chinonyanya kujekesa ndechekuti iwe unofanirwa kushandura maakaundi (uye makomputa). Simbisa komputa yako uchishandisa HWID Spoofer, inowanikwa chete paGamePron.
⬤ Mamiriro: Kudzokorora 🞄 2 Variants
Kutsvaga yakavimbika Hyper Scape Aimbot? Yedu Hyper Scape Hacks inokupa iwe yepamusoro-ye-iyo-iyo Aimbot, pamwe nezvimwe zvinoverengeka maficha izvo zvinoita kuti kuhwina kuve nyore basa. Rwadzazve, sezvo chishandiso chedu chiripo kubatsira. Unogona kukunda zvikwata zvese wega nemidziyo yedu yashandiswa.
Anarea Hondo Royale Hacks
Anarea Battle Royale mutambo unozivikanwa une mauto mazhinji ane hunyanzvi mukati, asi ko kana iwe uchikwanisa kuvakunda vese kamwechete? Uchishandisa yedu Anarea Blue Hack ichaita kuti iwe uzadzikise izvo chaizvo, uye zvinongowanikwa pano paGamePron. Ratidza nzira yekuparadza vadzivisi vako uchishandisa GamePron!
Pakati Pedu Hacks
Shandisa yedu Pakati Pedu Coco Hack kuzadzisa nyowani nyowani mukati Pakati Pedu! Vanhu havazokwanise kukumisa iwe kana uchinge wave kuumburuka, kunyanya kana iwe uine zvese zvakasarudzika maficha akagoneswa (anowanikwa chete pano paGamePron). Pakati Pedu panogona kuratidzika semutambo unonakidza wekutamba neshamwari dzako, asi zvinhu zvinogona kuita zvakakomba dzimwe nguva. Hazvimborwadzi kuve Pakati Pedu Coco kudonha pairi kana nguva dzaoma!
DayZ iri kuzokanda zvakawanda kwauri, izvo zvinogona kuita sekuremedza kune vatambi vatsva. Kunyangwe iwe uri mutsva kumutambo kana uchingoda zvishoma "kukurudzira", iwe unogona kutarisira kwedu DayZ Hacks kuendesa! Tora rubatsiro rwaunoda kubva GamePron. Zvese zvishandiso zvedu zvakagadziriswa kuti zvirambe zvisingaonekwe panguva yekushandisa, saka haufanire kunetseka nezvekurambidzwa. Kuchengetedza chinhu chakakosha paunosarudza kubira neGamePron!
Kudonha Guys Hacks
⬤ Mamiriro: Kudzokorora 🞄 1 musiyano
Kana iwe uchinyanya kukwikwidza uye uchida kuhwina mumitambo yega yega yaunotamba, kushandisa kwedu Kudonha Guys Hacks kuri kuenda newe kure. Unogona kutarisira GamePron kuti upe ese anonyanya kushanda maficha eKuwa Guys Hacks, pamwe nekuwedzera sarudzo. Iwe unofanirwa kuunganidza korona zhinji sezvaungade! Kushandisa kwedu Kudonha Guys Hacks kunokutendera iwe kuhwina ese emarudzi, uye dzivisa kubviswa nyore.
Gehena Rega Kusunungura Hacks
Hell Let Loose mutambo unogonesa imwe nhanho yekutarisa, uye kana ukashaya izvo, unogona kunge usingave nebudiriro yakawanda. Nekutenda, iwe unogona kushandisa yedu Hell Let Loose Hacks kuti uwane rwepamusoro ruoko muhondo dzako dzese! Pane zvakawanda zvekuita mumutambo uyu, pamwe nemaakona mazhinji akasiyana evavengi vako ekurwisa kubva. Wana chivimbo chaunoda kuti ubudirire uye utenge kiyi yechigadzirwa cheGehena Yedu Regedze Hacks nhasi.
PUBG Nhare (Android) Hacks
Kuteedzera kunogona kuve kwakaomarara kuzadzikisa kwevamwe, uye pane nguva apo nhare-yakavakirwa hacks ndiyo yako akanyanya kubheja. Uchishandisa yedu PUBG Nhare Inception Android Kubvumira kunokutendera iwe kuti ubudirire kunyangwe iwe usiri kutevedzera! Nezvinhu zvinotyisa senge PUBG Mobile Aimbot, Wallhack, ESP, uye nevamwe vazhinji, hapana dzimwe nzira dzinogona kuenderana nemhando yeGamePron. Tenga kiyi yechigadzirwa nhasi uye utore neakanakisa mupi online!
PUBG Nhare (Emulator) Hacks
Uchishandisa yedu PUBG Mobile Emulator hacks inokupa iwe kuwana kune izvo zvinhu iwe zvawaisambofungidzira kuti zvingave zvichitamba PUBG Mobile. Iwe unogona kushandisa stellar Aimbot iyo ichatora pasi vavengi nekumhanyisa, kana kunyangwe iyo Radar iyo inokuchengeta iwe wakangwarira! Vaviri vane ruzivo uye vevano bheja vanogona kubatsirwa nemidziyo yedu, zvese zvaunofanirwa kuita kutenga kiyi yechigadzirwa uye unogona kurodha pasi PUBG Mobile Emulator hacks ipapo.
Rogue Kambani Hacks
Kunyangwe mutambo uri mutsva, hapana chakasiyana nezve mhedzisiro yatinopa pano paGamePron. Nekupa vashandisi vedu kuwana kune akanakisa maturusi, isu tinogara tichivaisa muchinzvimbo chavanogona kubudirira! Izvo hazvina basa kuti wave nenguva yakareba sei uchigura kana kutamba mitambo, kushandisa yedu Rogue Kambani Hacks ichakubatsira iwe kubudirira munzira dzakawanda. Edza iwe pachako!
Spellbreak ndiwo mutambo wakakwana kune chero munhu anofarira nyika yekufungidzira. Iwe unogona kuve nyanzvi muroyi kana warlock, ingori nyaya yekuikuya kunze - kana iwe unogona kungoshandisa yedu Spellbreak Hacks! Usatambise chero nguva yako kana mari pane imwe Spellbreak Cheats. GamePron ndiye # 1 mupi wezvose Spellbreak hacks pamhepo, uye izvo zvinokodzera mhando inowanikwa mune edu ese maturusi. Tora ruzivo rwakanakisa runogoneka pano apa!
⬤ Mamiriro: Testing 🞄 1 musiyano
Kune akawanda akasiyana-siyana anoenda mukubudirira panguva yako yeScad adventures, uye kushandisa kwedu Squad Hacks kuri kudzikamisa matambudziko aunosangana nawo. Kunyangwe zviri zombies kana vatambi chaivo, kushandisa chishandiso chedu kuchakuchengetedza. Tsvaga zvakanakisa zvinhu uchishandisa yedu Yechikwata ESP kubira, kana ingo tora vadzivisi vako nekuchimbidza nekugonesa yedu yakavimbika Chikwata Aimbot. GamePron ine zvese zvaunoda!
Kunyangwe paine zvakawanda zvimwe zvishandiso pamusika zvinoti zvinokushandura kuita warface tenzi, mashoma kwazvo acho anoshanda seichi. Shandisa Warface GamePron kubira kuti uwane muganho pane wako anopikisa mune chero mamiriro, zvisinei nekuti vane hunyanzvi sei! Vamwe vatambi vachanyara kushandisa hacks nekuti vari kunetseka nezvekurambidzwa, asi izvo hazvigoneke pano. Zvese zvedu zvekubiridzira zviri 100% zvisingaonekwe kuchengetedza vashandisi veMitamboPron vakachengeteka.
Kunyangwe iwe uchida kuve unoshungurudza kana iwe uchingotarisa kuti usapesana, unogona kushandisa yedu GTA 5 Yakasarudzika Hack kubata zvinhu. Pfura ne 100% kunyatsoita kana kubereka chero mota yaungade neichi chisina tsvina chishandiso! Kana iwe uchirwara uye waneta nekupinda mu "Passive Mode" uye uchingoda kutamba mutambo, kurwisa moto nemoto nekugonesa yedu GTA 5 Exclusive Hack!
GamePron yakagadzira imwe yeakavimbika Paladins Hacks akawanikwa pawebhu, ichipa vashandisi vedu mukana wekuti vawane zvimwe zvezvinhu zvine simba zvakanyanya zvakawanikwa muPaladins kubiridzira. Unokodzera ruzivo rwekutamba zvirinani! Kugadzikana kwehusiku hwekurasikirwa muPaladins haisisiri dingindira, kunyanya kana iwe ukawana mukana kwenguva yakareba. Zvitengere iwe kiyi yechigadzirwa nhasi uye uone iwo akashatisisa hacks kutenderedza!
Mhete yeElysium Hacks
Mhete yeElysium mumwezve mutambo mutsva uyo unotora online mutambo wepamhepo kuti upamhe hure, asi iwe unogona chete kunakidzwa yakawanda kwazvo yemutambo pasina iyo chaiyo ROE Cheats. Uchishandisa ROE GamePron hacks inokupa iwe kuwana kune mamwe emasimba masimba maficha akambowanikwa mune chishandiso! GamePron yakatsaurirwa kuvandudzwa kwemhando yepamusoro hacks kwenguva yakati rebei, uye isu hatisi kuzochinja toni yedu chero nguva munguva pfupi - kana iwe uchida mhedzisiro, uri panzvimbo chaiyo.
Hunt: Showdown inokuyedza (uye shamwari dzako kana zvichibvira!) Nenzira dzakawanda, sezvo zvisiri zvekungopikisa zvikwata zvaunofanira kutsvaga. Bvisa zvikara zvese nevamwe vatambi pasina kana kunetsekana tichishandisa Hunt yedu: Showdown hack!
Mhirizhonga: Sandstorm Hacks
Insurgency: Sandstorm ichagara ichigadzirira kufa-vakaoma vateveri vemitambo yekupfura, asi iwe unogona kuenda pamusoro nekupfuura needu Insurgency: Sandstorm hacks!
Gungwa reMbavha Hacks
⬤ Kuuya manje manje
Kangani iwe paunowana chishandiso chiri kuzokushandura iwe kuva isingamiri-kuhwina muchina? GamePron chete ine kubudirira kwevashandisi vedu mupfungwa, saka kana iwe uchida mhedzisiro, kushandisa yedu Gungwa reMbavha Hack ndiyo chete nzira. Gamers avo vari kurwara uye vaneta nekuparadzwa pamhepo havafanirwe kubata nayo zvakare, sezvo yedu Gungwa reMbavha Hacks richachinja zvinhu kuita zvirinani.
ARMA 3 hacks hazvisi nyore kusangana nemazuva ano, sezvo vagadziri vazhinji vatotora pamusoro pavo kuenda kune mamwe mapurojekiti. Kwete chete kuti isu tine yakanyanya ARMA 3 Aimbot uye ARMA 3 ESP / Wall Hack, asi kune zvimwewo zvimwe zvinhu zvekutarisa kana iwe uchibiridzira neGamepron.
Red Dead Kununurwa 2 Hacks
Kunyangwe chiri chako chinangwa kana nzvimbo yevavengi, unogona kushandisa yedu RDR2 Hacks kuwana mukana mune chero mamiriro. Nguva dzose zvakanaka kudzidza zvakawanda nezve zvakakukomberedza, sezvo izvo zvichizokubatsira iwe kuhwina. Kunyangwe iwe uri mucheche kana zvasvika kune hacks iwe unogona kubatsirwa kubva kumaturusi edu. Dzese dzakapusa uye dzakananga, dzichipa kunyangwe iyo "yakasvibirira" hacker mukana wekurwa online! Isu tiri # 1 mupi weRDR2 Hacks nechikonzero.
Nhandare yehondo 2042 Hacks
Gadzirira hukuru hukuru uye mepu nyowani muHondo Yenhandare 2042 nekuwana mukana kune yedu inoshamisa Hondo yehondo 2042 GamePron kubira. Tiine stellar Battlefield 2042 aimbot, wallhack, uye ESP kudivi rako, kuhwina kwakawanda machisi chivimbiso.
Yedu COD Vanguard Hacks ichakurega iwe uchibudirira zvisinei kuti uri kutamba mutambo upi, sezvo vavengi vako vasingazo chengetedzeka kubva kuhasha dzako. Iwe unogona kugonesa iyo COD Vanguard Aimbot (ine Instant Kill) kuve nechokwadi chekuti kana iwe uchida kuti mumwe munhu afa, zvinoitika - hapana mibvunzo inobvunzwa!
Jarod McpheeKutanga Nguva Yekushandisa
"Kunyangwe ini ndisati ndambobira kare, Gamepron yakaita chinhu chose chinhu chakareruka."
Aneesa CallahanAne ruzivo Mushandisi
"Yakanyanya kutsetseka kupfuura mazhinji emamwe maturusi andakamboshandisa, uye ane simba."
Alex BarrowNyanzvi Hacker
"Sahunyanzvi hwekubira ini ndine zvakawanda zvandinoda, zvese izvo Gamepron inosangana!"
Joan SilvaKutanga Nguva Yekushandisa
"Kunyangwe ndiri mutsva kune zvese izvi ini ndichiri kugutsikana nemhedzisiro!"
Christopher VincentAne ruzivo Mushandisi
"Hacks haagare achizobatsira, kunze kwekunge iwe navo kubva Gamepron."
Roma LyonsNyanzvi Hacker
"Sezvo ini ndisingakwanise kuvimba nevandinoshanda navo ini ndinofanira kuvimba neGamepron kuti ndirambe ndichikwikwidza!"
Yousaf AminKutanga Nguva Yekushandisa
"Iwe haufanire kunge uri nyanzvi yekushandisa maturusi aya, inova yekubata kwakanaka."
Simon ChaneyAne ruzivo Mushandisi
"Kubva pane zvandingataure, Gamepron ichave nechishandiso chako zvisinei nehunyanzvi hwako."
Nojus SniderNyanzvi Hacker
"Funga nezveese iwo anokunda iwe aunogona kunge uchikwikwidza izvozvi ne Gamepron kubira parutivi rwako!"
Calvin MutengoKutanga Nguva Yekushandisa
"Usatya kuyedza izvi zvekubiridzira kana iwe uri wekutanga, sezvo zviri nyore."
Harmony ProctorAne ruzivo Mushandisi
"Kana paine chinhu chimwe chete chandinogona kupupurira, hunhu hweiyi hacks & kubiridzira."
Emmy RatcliffeAne ruzivo Mushandisi
"Vasikana vanoba vanobatana! NaGamepron hapana kundimisa mumitambo yese yandinoda."
Gemma JohnstonNyanzvi Hacker
"Chiitiko chehunyanzvi chekupaza chave chiri mukuda kwakanyanya kwebasa senge Gamepron kwenguva yakati rebei ikozvino."
Meerab YakanakaKutanga Nguva Yekushandisa
"Yakanga iri nguva yangu yekutanga kubiridzira uye ndinofanira kubvuma, Gamepron yakaita zvinhu EASY!"
Myles ReidAne ruzivo Mushandisi
"Semunhu ane ruzivo rwekuba, zvakachengeteka kutaura kuti Gamepron ndiyo yakanakisa inopa online izvozvi."
Alys WheelerNyanzvi Hacker
"Nei uchinetsekana neaya anokamhina hacks uye kubiridzira? Unogona kugara uchivimba Gamepron kuti basa riitwe."
Daanish GreigKutanga Nguva Yekushandisa
"Kana iwe uri wekutanga kubira usazvidya moyo, sezvo Gamepron iri nyore kushandisa uye kubatsirwa nayo."
Jaydan KavanaghAne ruzivo Mushandisi
"Iwe uchafanirwa kundibvisa ini kure nekombuta yangu neaya mabiridziro akaitwa!"
Miley EastwoodNyanzvi Hacker
"Kunyangwe vachindidaidza kuti "Beastwood", izvo zvinokonzeresa zvishandiso zvinoshamisa kubva kuGamepron."
Jayda BarclayKutanga Nguva Yekushandisa
"Ini ndaitya kwazvo pakutanga asi zvinoitika Gamepron yakaita kubiridzira zvisingaite nyore."
Muneeb MaganaAne ruzivo Mushandisi
"Ini handisiye kuwongorora kwakawanda .. asi kuwanda kwekunakidzwa kwandakaita ne Gamepron cheats zvakandimanikidza."
Jack DoddAne ruzivo Mushandisi
"Ini ndoziva mashandiro anoita hacks, zvinoreva kuti handina dambudziko kupa Gamepron wongororo huru."
Catrina MckinneyNyanzvi Hacker
"Ini handikwanise kuve neanotsvedza panguva yekugura uye Gamepron yakakwana kune izvo"
Sammy-Jo CraftKutanga Nguva Yekushandisa
"Usarega pfungwa yekuba ichikumisa kuti usvike zvibodzwa zvako zvemitambo."
Tiana OdlingNyanzvi Hacker
"Zvakawanda kunge waini yakanaka, zvinoita sekunge Gamepron yakura zvakaringana isu nyanzvi."
SneekiBoi JacobsonKutanga Nguva Yekushandisa
"Pakutanga ndanga ndisingazive zvekutarisira, asi chiitiko chekubira chaive chinotyisa!"
Aurora AldredAne ruzivo Mushandisi
"Nei chero munhu akaramba kushandisa Gamepron? Zvakafanana nekuramba mari yemahara!"
Caroline LivingstonNyanzvi Hacker
"Ndakave neakakwana ekushomeka hacks & kubiridzira, ndosaka ndichigara ndichitenga ku Gamepron."
Elodie McintyreKutanga Nguva Yekushandisa
"Unogona kubatsirwa nemidziyo iyi kunyangwe iwe uri wekutanga seni!"
Olly HumphriesNyanzvi Hacker
"Gamepron inopa che100% isingaonekwe cheats, zvinova ndizvo zvandanga ndichida."
Bronte BonnerKutanga Nguva Yekushandisa
"Kunyangwe iri Aimbot kana Wall Hack / ESP, Gamepron ichave nechimwe chinhu chaunotsvaga."
Joanne MerrittAne ruzivo Mushandisi
"Vanoziva uye vane ruzivo rwevabheki vachiri kuda izvo zvinopihwa Gamepron."
Billy-Joe O'MooreNyanzvi Hacker
"Kana hupenyu hwandiwisira pasi, ini ndinofarira kuchinjisa Gamepron yangu Aimbot uye kuzorora nemahwina mashoma."
Millie CortezNyanzvi Hacker
"Nei usingade kubira neGamepron? Ivo vanoita kuti basa riitwe nemazvo."
Misty NievesKutanga Nguva Yekushandisa
"Ndakanga ndisina chokwadi pakutanga, asi ndakadzidza nekukurumidza kuti Gamepron ndiyo yakanakisa."
Arnold BowersNyanzvi Hacker
"Chikamu chakanakisa nezve Gamepron chinofanirwa kuve chese chinowirirana chavanofanira kupa."
Ema WalshKutanga Nguva Yekushandisa
"Ini ndanga ndichitarisira kukandwa kumapere, asi Gamepron yakaita kuti kurodha pasi / kwekumisikidza maitiro zvive nyore."
Hanna KinneyAne ruzivo Mushandisi
"Nepo vazhinji vanogadzira zvigadzirwa vachindisiya ndichiora, rutsigiro rwevatengi rwakabatsira!"
Dominik YuNyanzvi Hacker
"Kana ndiine mibvunzo ndinogona kutarisira Kutsigirwa kweVatengi kuti vandipe rubatsiro rwandinoda!"
Archer GarrettKutanga Nguva Yekushandisa
"Semunhu wekutanga-nguva mushandisi, Gamepron yakaita kuti zvive nyore kwazvo kunzwisisa kuti kugura kunoshanda sei."
Arley GrahamAne ruzivo Mushandisi
"Iine zvinoshamisa maficha uye yakakura mutengo-poindi yekutarisa, Gamepron inogona kunge iri pane chimwe chinhu."
Zhizha MundaNyanzvi Hacker
"Siya izvo kune nyanzvi! Ndiri kuparadza vanhu nezvose izvi hacks & kubiridzira."
Issa VargasAne ruzivo Mushandisi
"Hapana shamwari dzangu dzinotamba mitambo yevhidhiyo, uye ndinofanira kushandisa kushandisa Gamepron kuti ndirambe ndichikwikwidza!"
Kellan HessKutanga Nguva Yekushandisa
"Kune yakawanda mitambo yekutora kubva pano ku Gamepron, saka hapana chikonzero chekuramba rubatsiro rwavo."
Henri WardleAne ruzivo Mushandisi
"Ndakafunga kuti ini ndaive "murume muhombe pamusasa", ndiko kusvika ndazoshandisa Gamepron!"
Lucas CostaNyanzvi Hacker
"Iwe ucharasikirwa nemikana yakawanda kwazvo kana ukasatora mukana we Gamepron!"
Yusha PopeAne ruzivo Mushandisi
"Isu hatigone kuve vakuru! Izvo kunze kwekunge munhu wese arikushandisa Gamepron kuenda kumberi."
PC yedu Hacks & Cheats anoshanda sei?
Isu tinotengesa kiyi dzechigadzirwa pano paGamepron, iyo inogona kuzoshandiswa kuwana zvese zvinoshamisa hacks isu takagadzira. Kana chishandiso changoburitswa, isu tinopa mashoma mashoma maslot kune vashandisi vedu - anotanga kuuya, tanga washandira, saka iwe unozoda kuita nekukurumidza.
Yekupedzisira Hack Solution
Yedu yese hacks ndiyo yekupedzisira yese-mu-imwe yekugadzirisa mhinduro, zvisinei nemutambo upi wauri kutsvaga kubiridzira mukati. Tichifunga nezve mhando uye huwandu hwezvinhu zviripo, zvakaoma kutaura kuti pane imwe nzira iri nani kunze uko. Kana iwe uchida mhedzisiro, Gamepron ndiro chete zita raunogona kuvimba.
Chero mutambo wakawanda wekusarudza sarudzo
Tine sarudzo hacks hombe pano paGamepron iyo inotenderera pamusoro pemitambo yakasiyana siyana, ichipa vashandisi vedu mukana wekuwana yakanyanya kuchinjika kataraki yekubiridzira paInternet. Tine akawanda hacks emitambo yakawanda yakasiyana, saka sarudzo ndeyako!
Bhadhara chete nguva yaunoda Zuva rega rega, vhiki kana pamwedzi
Haufanire kubhadhara mari yakawanda kana ukasaronga kushandisa hacks kwenguva yakareba, sezvo isu tichipa zvigadzirwa zvemakiyi zvinoshanda zuva nezuva, vhiki nevhiki, kana pamwedzi. Tine nguva dzakaringana kukwana zvinodiwa nemunhu wese pano paGamepron.
Sarudza mutambo waunoda kutamba
Sarudza mutambo waunoda kutamba! Sarudza kubva pane yakasarudzika sarudzo yemazita atakafukidza pano paGamepron uye kutonga vadzivisi vako pasina basa rakaoma.
Sarudza kubira kunokodzera zvaunoda
Isu tinopa yakawanda yesarudzo kana zvasvika kune izvo hacks iwe zvaunofarira - ingosarudza cheats izvo zvaunoda uye enderera kune kubhadhara
Bhadhara uchishandisa yedu yakachengeteka nzira dzekubhadhara
Zvese zvebhadharo zvakatorwa pano paGamepron zvinogadziriswa tichishandisa yedu yega yekubhadhara processor kuona kuchengetedzwa kweruzivo rwevatengi
Wana mukana wekiyi yako uye tora kukopa
Mushure mekuwana mukana kune yako kiyi yechigadzirwa, unogona kuishandisa kurodha cheats zvinoenderana. Isu tinoita kuti kurodha & kuisa maitiro kuve nyore pano paGamepron!
Gamepron ndiye anotungamira mupi wemitambo hacks uye kubiridzira
Zvese zvishandiso zvedu zvakagadzirwa zvine hungwaru kuchengetedza vashandisi vedu pamusoro, sekupera kwezuva, urikubhadhara mukana - zviri kwatiri kuti uve nechokwadi chekuti uri kutonga yega yega mutambo!
Chero mutambo & vazhinji vanopa, inogara iri online kubheka kune yega yega mutambo kusarudza kubva
Iko hakuna mumwe mupi pawebhu uyo ​​achatora maturusi ako zvakanyanya sezvatinoita pano paGamepron. Zvisinei nemutambo upi waunoda kubiridzira, isu tichagara tine mupi anovimbika wekukupa iwe ine masimba emagetsi.
Maitiro ayo Gamepron Anoshanda
Nei uchishandisa aimbot, kubiridzira kana hacks
Hacks yeYako Ese Anofarira Mitambo!
Yese emitambo yako yaunofarira inogona kubiwa, ingori nyaya yekutsvaga sevhisi chaiyo yekutenda. Iwe haungade kushandisa yakaderera-mhando hacks pane huru account, ndoda iyo smurf account! Izvo zvakada kufanana nekukumbira kurambidzwa nechinangwa, sezvo vazhinji vevagadziri vachigadzira hacks mazuva ano havane hanya nekuchengetedzeka kwevashandisi vavo. Kwete chete iwe unozogona kutenga kupinda kune hacks kune ese ako aunofarira mazita, asi iwe zvakare unozogona kuzviita nerunyararo rwepfungwa. Gamepron haina kuzivikanwa uye icharega maakaunzi ako achifambira mberi nekukurumidza uchishandisa hacks, asi inokutendera iwe kuti udaro pasina njodzi dzese dzakabatana nekubiridzira
Kunyangwe iwe uchida kubira muRust, Overwatch, Kutiza kubva kuTarkov, kana chero mamwe mazita anoshamisa atakagadzira cheats, Gamepron ndiyo inzvimbo yakakwana yezvako zvese zvekupaza zvaunoda. Ivo avo vari mukuda kwakanyanya kwekubira mhinduro vanogona pakupedzisira kuwana runyararo, sezvo Gamepron iri pano kuzoponesa zuva!
Ndeapi Mhando Yemaficha Anosanganisirwa?
Kunyangwe iwe uri fan wevatanga-kupfura vanhu, mitambo yekupona, kana chero chinhu chiri pakati, Gamepron ichave nematurusi akavimbika awanga uchitsvaga panguva yese iyi. Isu tinopa Aimbots, ESP / Wall Hacks, NoRecoil, uye zvimwe zvakawanda zvinoshamisa mukati medzvedu cheats - uye ndiko kutanga chete. Huwandu hwezvinhu zviripo mukati medu maturusi ndeimwe yezvikonzero zvikonzero nei vashandisi vachiramba vachidzoka kuti vawane zvimwe, sezvavanotoziva kuti Gamepron iri kuzovapa mukana wekubiridzira cheats pamhepo. Nepo vamwe vagadziri vari mubishi kuyedza kucheka makona uye kuita purofiti chero kwavanogona, Gamepron ichagara yakaramba yakanangana nekupa vatengi vedu ine yakavimbika hack mhinduro
Kunyangwe isu takagadzira kubiridzira mukati-imba kana kushanda neumwe wedu vazhinji vane mbiri vatinoshanda navo, ese hacks aunoshandisa kubva Gamepron anosanganisira maficha aungave usina kumboona kare. Nezvinodiwa zvetsoka, Kumusoro Kukuvadza, uye Kureba, vashoma vanhu pane ino nyika vanoenderana nhanho yako!
Nei Ndingangoda Aimbot?
Mazhinji mitambo ichaenda kunopa mubairo mutambi ane hunyanzvi, uye hapana zvakawanda zvaungaite nezve izvo - ndosaka iwe uchiona vanoyerera uye nyanzvi dzemitambo vachidzidzira zvakanyanya sezvavanogona. Kana iwe usingakwanise kupedza maawa pamberi pekomputa yako kana kungoramba kuita kudaro, iwe unogona zvakare kungotarisira Gamepron kuve neiyo Aimbot yakakwana yezvaunoda. Kunyangwe iwe uchida EFT Aimbot, Yemazuva Ano Hondo Aimbot (kana Warzone Aimbot!), Kana kunyangwe iyo EFT Aimbot, Gamepron ndiyo yega inopa iyo inogona kukuchengetedza iwe uchitonga zvakachengeteka.
MaAimbots edu anouya akashongedzerwa nenzira yakawanda maficha kupfuura mazhinji, sezvo iwe uchizokwanisa kushandisa izvo zvinofarirwa zveKurumidza Kuuraya uye Bhu Kukoshesa. Iwo maAimbots ose akagadzirwa neAuto-Chinangwa / Moto, uye iyo Smooth Aiming ficha inobvumira ako kuuraya kuti aite senge zvakanyanya kusikwa. Kana iwe uchida kubiridzira nehungwaru, asi uchiri kuda iyo firepower inouya nekushandisa Aimbot, Gamepron ine mhinduro kwayo. Chinangwa chakashata hachizombofa chakauraya iwe zvakare!
Tenga Zvese zveHacks Zvako Nhasi!
Unogona kutenga kuwana kune ese hacks awakamboda pano paGamepron, ingori nyaya yekuita pazviri. Kunyangwe iwe wakambobiridzira munguva yakapfuura hazvina basa, nekuti kunyangwe ivo vatambi vechikoro vepasi rose vanogona kushandisa edu hacks. Takaita kudhanilodha nekumisikidza maitiro akareruka kuona kuti hacks ichave yakagadzirira kuenda nekukurumidza sezvazvinogona. Iine huwandu hwakawanda hwemitambo & hacks yekusarudza kubva, mumwe anogona kupokana kuti Gamepron ndiyo inonyanya kukoshesa mupiki wekutenderedza iko zvino!
Kubhadhara kwako kunozoitwa neyedu yega yekubhadhara processor kuona kuti hapana ruzivo rwako rwepamoyo rwuri panjodzi yekufumurwa, inova imwezve nhare yekuchengetedza yatakatora nguva yekuwedzera pano paGamepron. Unogona kutenga akawanda makiyi echigadzirwa sezvaungade, chero bedzi nzvimbo dzakasununguka dzakavhurika uye nguva yauri kutsvaga iripo. Tenga kiyi yechigadzirwa nhasi uye utange!
Kukunda. Zvese. Mutambo.
The simba kuhwina Yese Game ne Gamepron Hacks & Cheats
Tiza kubva kuTarkov Hacks
Nhema Ops: Cold War Hacks
Pakati Pedu Kubhejera
Kudonha Vakomana Kugura
GTA 5 Kubira
Gehena Rega Kusunungura Kubhejera
Hyper Scape Kubira
Yekupedzisira Oasis Hacks
PUBG Nhare Hacks (Android)
PUBG Nhare Hacks (Emulator)
Muraraungu Six Kutyisidzirwa Hacks
Tsvuku yakafa kununurwa 2 Hacks
Mhirizhonga Sandstorm Hack
Wepamusoro Hacks & Zvigadzirwa
Pakati Pedu Kubhejera naCoco
Anarea Hacks neBlue
Apex Hacks neAtomu
Apex Hacks neClassic
Apex Hacks neMusango
Apex Hacks neIntel
Apex Hacks neMulti-Legit
Nhandare yehondo 5 Hacks neIntel
BO Cold Hondo Inotyiwa neGamepron
BO Cold Hondo Inotyiwa neIntel
BO Cold Hondo Kubira naOlima
BO Cold Hondo Kubira neSC
CSGO Hacks neAccento
DayZ Hacks naAlfa
DayZ Hacks neIntel
DayZ Hacks naOlima
Vakafa neMasikati Hacks naHoplit
Vakafa neMasikati Hacks neIntel
Vakafa Rutivi Hacks neIntel
Chikamu 2 Hacks naOlima
Tiza kubva kuTarkov Hacks naAlfa
Tiza kubva kuTarkov Hacks naPosh
Tiza kubva kuTarkov Hacks neIntel
Tiza kubva kuTarkov Hacks naOlima
Kuwa Vakomana Kugura neHoplit
Fortnite Kubhejera naEzWin
GTA 5 Kugura neSC
Hardware ID Spoofer na Gamepron
Hardware ID Spoofer neQC
Gehena Rega Kusunungura Kusagadzikana neIntel
Hunt Showdown Hacks neIntel
Hyper Scape Kubira ne Cloud
Hyper Scape Hack ne Gamepron
Yekupedzisira Oasis Kubira neIntel
Yemazuva Ano Hondo YeHack neMult-Legit
Yemazuva Ano Hondo Yekugura naHush
Yemazuva Ano Hondo YeHack neIntel
Yemazuva Ano Hondo YeHack neMult-Rage
Overwatch Hack naAtemisi
Overwatch Kubhejera neNeon
Paladins Anotyora neAccento
PUBG Inotyoka neKachengeteka
PUBG Inotyiwa neIntel
PUBG Kubira neRage
PUBG Lite Kubhejera naCzar
PUBG Lite Kubheja neRoto
PUBG Nhare Hunyoro neGloop
PUBG Nhare Huru neTX
PUBG Nhare mbozha neLD
PUBG Nhare mbozha yeMagnum
PUBG Nhare mbozha neVenom
Rainbow Siege Kutyisidzirwa neChinyakare
Rainbow Siege Kutyisidzirwa ne Gamepron
Rainbow Siege Kutyisidzirwa neIntel
Battlefield 2042 Hacks naHyperion
Mhete yeElysium Hack neAccento
Rogue Kambani Inotyiwa neIntel
Ngura Inobika neClassic
Ngura Inotyiwa neMusango
Ngura Kugadzira naHoplit
Ngura Kugadzira neIntel
Ngura Kugura naPosh
Spellbreak Inotyiwa neIntel
Chikwata Hacks neIntel
Valorant Hack ne Gamepron
Valorant Hack neHyper
Warface Hack neBlue
Warzone Kubhejera neMulti-Legit
Warzone Hack naHush
Warzone Hack neIntel
Warzone Kubhejera neMulti-Hasha
Kupandukira Dutu Dutu Kugadzira neZero
Tiza kubva kuTarkov Hacks neClassic
BO Cold Hondo Kubira naHush
PUBG Inotyiwa neWR
Tiza kubva kuTarkov Hack naWR
Apex Nhoroondo dzeHack Hack neWR
Ngura Kugadzira neWR